Kansarku wuu Fidayaa - Bulwark - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Kansarku Waa Faafi - Bulwark
Sanadkii la soo dhaafay waxaan qoray a piece asagoo ku doodaya inaan wada rajeyn karno inuu jiro cajalad uu Donald Trump ku hadlayo ereyga n.
Waa kuwan nub:
[N] wax kasta oo aad dareenkaaga ka qabtid Trump, waa inaad rajeyneysaa in cajaladahaani, haddii ay jiraan, weligoodna aan la arkin iftiinka maalinta. . . . Ma u malaynaysaa inuu luminayo taageerada saldhigiisa? . . . Ama isticmaalka N-erayga? Ma qabo. Wax kasta oo aan ka ogaanno kooxda kubbadda koleyga madaxweynaha waxay ku noqdeen kaliya goolal, oo si joogto ah dib ugu laabanaya.
Tani waa faallooyin ku saabsan astaamaha salkiisa, xaqiiqdii. Laakiin waa wax badan oo ku saabsan sida ay cidhiidhi u tahay. Heerka oggolaanshaha Trump ee ka dhexeeya taageerayaasha Jamhuuriga ee xoogga leh aad bey u sarreeyaan: boqolkiiba 93 oo ka mid ah dadka isaga ugu codeeyay 2016 Oggolaanshahiisa ka dhex jira cid kasta oo kale waa wax laga xumaado: Boqolkiiba 39 ka mid ah madax-bannaanida; Boqolkiiba 9 ee ka dhexeeya Dimuqraadiga. Sida arin qaab dhismeedka ah, waxbadan kuma lahan kooxahaan. Oo haddii labadii sano ee la soo dhaafay ay noqon lahayd hage-Stormy Daniels, lacag-bixinno, loo diido America inta lagu ammaanayo Russia, daboolka Kim Jong-a, fadeexad-markaa shaqaalaha Trump ayaa durbaba ku nasanaaya aasaaskiisa.
Laakiin aan iska dhigno in Trump uu qodi karo, cajalad N-eray ah doonaynin ugu dambeyntiina waa cawska jabaya dhabarka geelu. Aynu iska dhigno in oggolaanshaha Trump uu ku dhex dhacay xisbiga Jamhuuriga. Waa sidee haddaba? Isagu ma doonayo inuu is casilo. Looma qasbin doono in laga qaado oo laga qaado xafiiska. Fikradda #Resistance fantastik waa in qaar deus ex machina ka dhigi doonaa Trump baaba'aan. Tani ma dhici doonto. Sida kaliya ee uu Trump uga baxo waa luminta dib-u-doorashada 2020. Labada wanaag iyo wanaagba, Madaxweyne Trump waa xaqiiqadeenu waa inuu sii wadaa saameynta adduunka ku xeeran.
Marka waa inaan qiyaasi karnaa sida Trump daciif u noqon lahaa labada sano ee soo socota. Ma u malaynaysaa inuu burburin doono, oo bilaabi doono inuu u dhaqmo sidii qof dowladeed, oo isku dayo inuu dalka mideeyo? Mise u malaynaysaa inuu ku riixi lahaa fowdo iyo kala qaybsanaan dheeraad ah rajooyinka si uun si toos ah ugu jihaysan gudaha toos ah (mar labaad)? Haddii loo maleeyo inuu sameeyo, waxa kaliya ee suuragalka ah ee hoos-imaan kara istiraatiijiyad noocaas ah, marka loo eego aragtida Trump, waxay sal u tahay nolosha siyaasadeed ee Mareykanka ee qofkasta oo guuleysta. Oo waxay noqon lahayd cayayaanka, laakiin astaamaha.
Haddii aad fiiriso maamulka Trump oo aad u maleyneyso inuusan ka sii dari karin, ka dibna kama fekerin waxa uu noqon karo Trump-gubtay-dhulgariirku. Laakiin natiijada ugu xun waa tan u baahan qiyaasta ugu yar iyo mala-awaalka. Iyada oo ay arrimuhu sax yihiin wali waxaa jira tiro badan oo caadooyin ah oo ka haray nolosha bulshada. In aan la dhihin N-erayga waa mid ka mid ah. Way fiicnaan laheyd haddii aan ku sii socon lahayn nidaamkaas. Haddii aan haysano cajalad ku duuban madaxweynaha Mareykanka oo sheegaysa oo aysan ku dhici doonin cawaaqib xumo, caadadaas waa la jebin doonaa.
Uma maleynayo inay wax badan dhimanayso.
"Ku noqo waddankaaga" dhab ahaan maahan nooc fallaag ah oo oranaya N-eray, laakiin waxay ku jirtaa isla lambar lambar zip ah. Laga yaabee ballpark isku mid ah.
Saldhigga jamhuuriga ayaa labanlaabmay isaga. Jamhuuriyada la soo doortay ayaa isaga la joogay, rikoorka. Lambarrada ansixinta cod-bixiyeyaasha Jamhuuriga ayaa leh kordhay.
Dhaleecaynta midab-takoorka toos ahi meel kasta ayuu ka baxayaa.
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay websaydhka Mareykanka Weyn. Waa ninka fikirka leh OANN. Waxay daabacdaa badiyaa qorniinka qorniinka iyo akhrinta, laakiin sidoo kale dad xushmad leh, sida Henry Olsen oo ka socda Xarunta anshaxa iyo siyaasada guud iyo Victor Davis Hanson oo ka socda Review Qaranka iyo Machadka Hoover.
Isbuucaan Mareykanka Weyn daabacay gabay aan la aqoon oo cinwaan looga dhigay "Cuck Elegy." Ma doonayo inaan ku xidho arrintaas. Waa an Weerarka David Faransiis iyo muxaafidyada kale ee awooda leh ayaa aad ugu badan habka ogolaanshaha. . . si fiican, wax kasta.
Bartamaha dhexdeeda aayadduna waa sadarradaan:
"Koonfurta Koonfurta"? Laasaros maqaar-gareeyay '?
"Adigu waad ka taajirsan tahay isaga haddaanad lacag ku jirin, ka dibna maqaarkaaga cad"?
Waxba kama ogi cunsuriyadda iyo cunsuriyadda, laakiin xaqiiqdi, daacad-u-ahaanta, nooca KKK-nacaybka waddaniyadda.
Gaar ahaan tan-mar kale-qoraagu wuxuu adeegsanayaa eray been abuur ah. Waa kuwee qoraal ahaan u dhigma xirashada xijaab Haddii ay jiri lahayd tarjumaad aan micno lahayn tan, markaa magaca qoraaga ayaa dusha ku yaal.
Maahan wax kadis ah in jagadan ay ka muuqatay degel internet oo u go’ay difaaca iyo jiritaanka Donald Trump.
Sidan ayaa ah kansarku ku faafo.
Waddaniga cad ee sii kordhaya ayaa dhib badan. Xaqiiqdii, ereyga "khalkhal geliya" gebi ahaanba cadaalad ma sameeyo. Aad bay uga sii xun tahay tan.
Laakiin maahan qatarta u dhow dhammaan waxaas.
Waxaan wax ka qoray xagaagii la soo dhaafay, oo ku saabsan sida Trump uu ugu socdo fadeexadda mowqifkiisa saldhiggiisuna uu gabi ahaanba yahay, waxaan albaab u furay xiisad dastuuri ah.
Andrew Egger pokes agagaarka Fikraddaas maqaalkiisa subaxnimadi hore ee ku saabsan diidmada Republicans-ka (iyadoo afar arrimood oo sharafta mudan) ay u codeeyeen qaraar aan meel marinin oo dhalleeceeya weerarka madaxweynaha ee ku wajahan xubnaha kale ee baarlamaanka:
Ma jirin wax khilaaf khilaaf ah oo daneynaya xildhibaannada inay tixgeliyaan halkan; ma jiro muxaafid "wanaag aad u sarreeya" oo khatar ku jiray. Ma aysan siinin kursiga SCOTUS ama canshuur dhimis. Waxay ahayd lacag la’aan. Donald Trump kaliya wuxuu yiri ma waxaad ubaahan doontaa inaad mudaaharaaddo codkaaga? Ficil ahaan midkoodna ma sameyn doono. Way adag tahay in la arko iyaga oo aad uga sii dhacaya intaas. Ujeeddooyinka iyo ujeeddooyinka oo dhan, hay'adda GOP hadda waa dhammaystiran tahay.
Waxaad ka heli kartaa nacaskan dahabiga ah ee karaahiyada ah ama akhlaaq xumada leh. Laakiin aad bay uga sii xun tahay tan: Waa halis.
Republicans-ka ayaa had iyo jeer naftooda u sheegaya in talaabooyinka Trump uu qaaday, uusan waligii awoodi doonin inuu ku dhaqmo. Difaaca dimuqraadiyadda aad ayey u xoog badnaayeen; jirka ugu weyn ee xisbiga ayaa kaliya u oggolaan doona inuu si qaldan u sii socdo.
Weydii naftaada tan: Haddii aadan taageeri karin qaraar aan sharci ahayn, markaa maxaa kicin kara Trump waxaas doonaynin gadaal gadaal u riix, khaasatan hadii gadaal riixida ay iyaga wax ku kici lahayd?
Kawaran, sida tusaale ahaan, Trump waxaa looga adkaaday maris ciriiri ah 2020 wuxuuna go’aansaday inuu u tartamo doorashada? Ka waran haddii uu sheegto guuldaradiisa inay ahayd natiijada "codadka sharci darrada ah" iyo "nidaam qalloocan" dhaqanku ma halisbaa? Taasi waxay ku adkeysan lahaayeen inuu Trump joojiyo oo uu sii wado awooda wareejinta?
Waa kuwee waxa aanan joojin karin ka fikirka.
Dadku waxay xirayaan dhammaan noocyada dhacdooyinka dastuuriga ee dastuuriga ah ee ku saabsan Trump: Ka waran haddii uu ku soo rido gantaalaha nukliyeerka qumbaha? Ka waran haddii uu go'aansado inuu mar saddexaad u tartamo?
Xaaladahan waxay u baahan yihiin xoogaa waxoogaa ah oo wax laga beddelay Trump. Waxay u baahan yihiin mala-awaal Trump aan weli qaab dhismeedka lahayn.
Aniga ahaan, welwelka weyn waa tan: Ka waran haddii, lix usbuuc ka hor doorashadii 2020, uu si sax ah u yiraahdo isla waxyaabihii uu yiri lix usbuuc ka hor doorashadii 2016?
Hadda ka hor ayaan kor u qaaday qaylo dhaantaan mar labaad waanan sameyn doonaa, maxaa yeelay waa muhiim. Orodkii 2016, Trump wuxuu sheegay in doorashada ay dhaceyso. Flat out waa diiday. Doorashadii ka dib wuxuu codsaday cod.
Marka maxaa dhacaya haddii, markay tahay Oktoobar 2020 amarkii uu madaxweynuhu diidayo inuu dhaho u hoggaansamo natiijooyinka doorashada?
Maxaa dhacaya haddii doorashada la xiro oo Trump lumiyo, markaa, madaxweynaha fadhiya Mareykanka wuxuu leeyahay natiijooyinka waa been abuur, runtiina wuxuu ku guuleystey codeynta caanka ah?
Midkoodna midkoodna uma baahna male-awaal ama wax-ka-saarid. Tani maahan tijaabo fikir. Kaliya waxaan u istcimaalaynaa waxyaabaha halkan oo aan ku qabannaa isla macnaha.
Maxaa dhacayaa markaa?
Waxaan nafteena u sheegnay in Mitch McConnell iyo jamhuuriyada kale ee kobcinaysa ay jeclaan lahaayeen inay soo galaan, in tani aysan noqon doonin dagaal qayb qayb ah. Taasi oo ah jamhuuriyada la soo doortay wax dhib ah kuma lahan kala soocida dastuurka. Xitaa haddii loola jeedo in lagu bixiyo xoogaa qiimo ah.
Waxyaabaha ugu layaabka badan ee ku saabsan codeynta Talaadada ma ahan cunsurinimo. Waa astaan ​​u ah in aan ku dhex rogno xiisad dastuuri ah oo dhab ah, ma awoodi doonno in aan ku xisaabtano dadka Jamhuuriga ah in ay gutaan waajibaadkooda.
Waxaa jira khad weyn LA Confidential meesha musuqmaasuqu yahay damiirka. "Ha bilaabin isku dayga inaad saxdo, wiil-o," ayuu yidhi. "Tababar ma lihid."
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://thebulwark.com/the-cancer-is-spreading/